सामान्य मुटुको दर के हो? जान्नुहोस् तपाईको बीपीएम तपाईको स्वास्थ्यको लागि के हो - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
चेकआउट भारी खेल औषधि जानकारी, समाचार औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य घरपालुवा जनावर कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर प्रेस समुदाय, कम्पनी
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> सामान्य मुटुको दर के हो?
सामान्य मुटुको दर के हो?
अधिकांश व्यक्तिहरूले उनीहरूको मुटुको दर कस्तो हो भनेर दुई पटक सोच्दैन जबसम्म उनीहरू कष्ट वा मुटुको समस्याका लक्षणहरू अनुभव गरिरहेका छैनन्। जहाँसम्म, तपाईलाई मुटुको समस्या नभए पनि सामान्य मुटुको दर कस्तो हुनुपर्दछ भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। १ 18 बर्ष भन्दा माथिका वयस्कहरूको लागि, सामान्य आराम मुटुको दर प्रति मिनेट and० र १०० बिट्सको बीचमा हुनुपर्दछ। Through देखि १ 15 वर्ष उमेरका बच्चाहरूको हृदय गति प्रति मिनेट and० र १०० बिट्स बीच हुनुपर्दछ। आउनुहोस् हामी यी नम्बरहरूको अर्थ के हुन्छ हेरौं, कसरी तपाईंको मुटुको दरलाई नाप्ने, र कुन कारणहरूले तपाईंको मुटुको दरलाई माथि वा तल जान दिन्छ।
मुटुको दर दर एक मिनेट मुटु मांसपेशीको धड्कन संख्या को एक मापन हो। स्वस्थ बच्चाहरू र वयस्कहरूको हृदयहरू हुन्छन् जुन उनीहरूको उमेर र शरीरको आकारको कारण विभिन्न वेगमा हराउँदछ। यदि मुटु धेरै छिटो वा ढिलो पिट्दै छ भने, यसको मतलब यो हुन सक्दछ कि तपाईंको अन्तर्निहित स्वास्थ्य समस्या छ। तपाईंको आरामको मुटुको दरले तपाईंलाई तपाईंको हालको मुटुको स्वास्थ्यको पनि गेज गर्न अनुमति दिन्छ।
सामान्यतया, कम आराम गर्ने मुटुको दर भनेको मुटुमा प्रति मिनेट कम पिटिएको छ, जसको मतलब यो अधिक कुशल छ। तपाईको आराम गरिरहेको मुटुको दरले बताउँछ कि जब तपाई आराम गरीरहनुभएको अवस्थामा बस्नुहुन्छ वा सुत्न गर्नुहुन्छ भने तपाईँको मुटु कति छिटो पिट्दछ।यदि तपाईंको आरामको मुटुको दर बढ्यो भने यसको मतलब तपाईको शारीरिक स्वास्थता कम छ, वा तपाईलाई मुटुको अवस्था विकास गर्ने जोखिममा छ।
तपाईंको उमेरको लागि तपाईंको लक्षित मुटुको दर कस्तो हुनुपर्दछ भनेर जान्न तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ यदि र जब तपाईंको मुटुको दर असामान्य छ, जुन यो स may्केत हुन सक्छ कि यो डाक्टरमा जाने समय हो।
उमेर अनुसार सामान्य मुटुको दर
उमेर धडकनकाे गति
१--5 वर्ष पुरानो -1०-१-1० बेलुका
6-15 वर्ष पुरानो 70-100 bpm
१ and र अधिक उमेर 60-100 bpm
जसै हामी वृद्ध हुँदै जान्छौं, एक स्वस्थ सामान्य आराम हृदय दर को मानिन्छ को सीमा परिवर्तन हुनेछ।
औसत स्वस्थ वयस्कको heart० बीपीएम वा सो भन्दा बढि आरामको मुटुको दर हुनेछ। यद्यपि क्लिनिकल अभ्यासमा, heart० र १०० बीपीएम बीचको आराम मुटुको दर सामान्य मानिन्छ, 80० बीपीएम भन्दा बढी विश्रामको मुटुको दर भएका मानिसहरूलाई विकासको जोखिम बढी हुन्छ हृदय रोग ।
जहाँ व्यायाम गरेर मुटुको दरलाई १ 130० वा २०० बीपीएम सम्म धकेल्न सम्भव छ, नियमित हृदयमा यो उच्च प्रहार गर्ने मुटुलाई चिकित्सा उपचार चाहिन्छ। समान हृदयको लागि साँचो हो जुन लगातार ating० बीपीएम भन्दा कम पिटिन्छ। खेलाडीहरू एक अपवाद हुन्। उनीहरूको उच्च फिटनेस स्तरहरू स्वाभाविक रूपमा आराम गर्ने हृदय दर कम गर्दछ।
सामान्य रक्त शर्करा को स्तर के हुनुपर्छ
सम्बन्धित: हृदय रोग तथ्या .्क
मुटुको दर कसरी मापन गर्ने
तपाईको मुटुको दर मापन गर्न को लागी गर्न सजिलो छ यदि तपाईं केहि सरल चरणहरु अनुसरण गर्नुहुन्छ। तपाईको मुटुको दर मापन गर्न सजिलो स्थान तपाईको मा छ नाडी , औंठाको आधार तल मात्र। तपाइँको औंठाको आधारमा हड्डी र टेन्डनको बीचमा तपाइँको अनुक्रमणिका र मध्य औंलाहरू राख्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले आफ्नो नाडी महसुस गर्नुभयो भने, पिट्ने संख्या १ count सेकेन्डमा महसुस गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले कति दालहरू गणना गर्नुभयो, तपाईंले त्यस संख्यालाई चार गुणा पार्नुहुनेछ। यसले तपाइँलाई एक मिनेटमा पटक पटक तपाईंको मुटुको धड्कन दिन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँको मुटु १ 15 सेकेन्ड मा १ times चोटि धड़कन्छ भने, तपाइँको मुटुको दर प्रति मिनेट be२ धडकन छ।
यो तपाईको मुटुको दरलाई मापन गर्न महत्त्वपूर्ण छ जब तपाई आराम पाएको राज्यमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईं कुनै पनी गतिविधि पछि तपाईंको नाडी लिनुहुन्छ भने, तपाईं सही पढ्नुहुन्न। तपाईले आराम गर्ने मुटुको दर लिन व्यायाम गरिसकेपछि एक वा दुई घण्टा कुर्नुपर्दछ, र एक घण्टा पछि क्याफिन खपत गरेको अनुसार। हार्वर्ड स्वास्थ्य ।
कुन कारणले मुटुको दरलाई असर गर्छ?
बाह्य र व्यक्तिगत कारकको आधारमा व्यक्तिको मुटुको दर दिनभर भिन्न हुन्छ, जस्तै निम्न:
उच्च वायु तापमान र आर्द्रता: जब तापक्रम र आर्द्रता माथि जान्छ, यसले मुटुलाई बढी रगत पम्प गर्दछ, त्यसैले मुटुको दर बढ्नेछ।
मोटोपना: अध्ययन देखाउनुहोस् कि मोटोपनाले मुटुलाई छिटो धड्किन्छ किनभने शरीरमा फ्याटको उच्च स्तरको कारण रगतको उच्च मात्रा हुन्छ। यसको मतलब रगत पम्प गर्न हृदयले कडा परिश्रम गर्नुपर्दछ।
औषधिहरू: केहि औषधीहरूले हृदयको धड्कन कति छिटो असर गर्न सक्छ। उच्च रक्तचाप औषधिहरू जस्तै बीटा ब्लकरहरू, उदाहरणका लागि, नाडीलाई ढिलो गर्न सक्दछ। अर्कोतर्फ, धेरै थाइरोइड औषधी सेवन गर्दा मुटुको दर बढ्न सक्छ।
शरीर स्थिति: यदि तपाईं आराम गरीरहनुभएको छ, बसेर, वा उभिरहेको छ भने, तपाईंको मुटुको दर समान रहन्छ। यदि तपाईं झूट बोलेर वा स्ट्यान्डिंगमा जानुहुन्छ भने, यसले तपाईंको मुटुको दर बढ्न सक्छ १ to देखि २० सेकेन्ड किनभने तपाईको मुटुले तपाईको मांसपेशिहरुमा रगत सार्न यसको नाडी दर बढाउनु पर्दछ।
उमेर:उमेर अनुसार मुटु र रक्त वाहिकाहरु लाई परिवर्तन गर्दछ वृद्धावस्थामा राष्ट्रीय संस्थान । जब मानिसहरु बूढो हुन्छन, शारीरिक गतिविधि वा तनावको समयमा उनीहरूको मुटु छिटो हराउन सक्दैन। जे होस्, आराम गर्ने मुटुको दरहरू उमेरका साथ खास परिवर्तन हुँदैन।
लि :्ग: जब लि gender्गमा फरक पर्दछ, महिलामा औसत आराम गर्ने मुटुको दर हुन्छ जुन पुरुषहरू भन्दा बढी हुन्छ, तर अध्ययनले देखाए अनुसार महिलाले सामान्यतया हृदय रोग को अनुहार मा राम्रो हृदय समारोह पुरुषहरु भन्दा
भावनाहरु: यदि तपाईं तनावग्रस्त, चिन्तित, निराश, निराश वा डरको महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको मुटुको दर बढ्नेछ। यसको कारण यो प्रकारको भावनाहरु लाई तनाव हार्मोनहरु जस्तै जारी कोर्टिसोल र एड्रेनालाईन , जसले हृदयलाई छिटो हराउन भन्छ। यदि तपाईं आराम, शान्त र सुरक्षित महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको मुटुको दर तल्लो तहमा झर्नेछ।
खाने बानी: धेरै मात्रामा सोडियमको सेवनले मुटुलाई छिटो हराउन सक्छ। जब शरीरसँग धेरै सोडियम हुन्छ, यसले किडनीमा फ्ल्युड रिबसर्प्शन बढाउँदै पातलो पार्ने प्रयास गर्दछ। यसले रगतको मात्रा बढेको स्तरमा परिणाम दिन्छ, जसले मुटु छिटो पार्छ। संतृप्त फ्याटको उच्च खानाले अप्रत्यक्ष रूपमा मुटुको दरहरू बढाउन सक्छ किनभने खराब फ्याटको परिणामस्वरूप उच्चता हुन्छ कोलेस्ट्रोल स्तर र हृदय गतिविधिमा परिवर्तन गर्न योगदान।
व्यायाम: प्रमाणले देखाउँदछ कि नियमित व्यायाम गर्दा समयको साथमा आरामको मुटुको दर पनि कम हुन्छ उच्च विश्राम हृदय दर हुनुबाट मृत्युको जोखिम ।
चिकित्सा अवस्था: मुटु रोग र फोक्सोको रोगले आरामको मुटुको दर बढाउन सक्छ। ओभरएक्टिव थाइरोइड विकारहरू जस्तै ग्रुभ्स रोग र विषाक्त गोइटर, बढाइएको मुटुको दरको एक सामान्य कारण हो।
केहि चिकित्सा अवस्था को पारिवारिक इतिहास:केही हृदय अवस्था वंशानुगत हुन्छ। यदि तपाईंसँग मुटु वा रक्तचाप समस्याहरूको पारिवारिक इतिहास छ भने, तपाईंलाई उच्च आराम गर्ने हृदय गति र हृदय रोगको बढ्ने जोखिम हुने सम्भावना हुन सक्छ।
अधिकतम र लक्षित मुटुको दर
तपाईंको हृदय र शरीरलाई नोक्सान पुर्‍याउनबाट जोगिन तपाईंको अधिकतम मुटुको दर कस्तो हुनुपर्दछ भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईको अधिकतम मुटुको दर गणना गर्न तपाईको उमेर २२० बाट घटाउनुहोस्। अनुसार अमेरिकी हार्ट संघ (एएचए), मध्यम गहन गतिविधिहरू गर्दा तपाईंको लक्षित मुटुको दर तपाईंको अधिकतम मुटुको दरको बारेमा %०% देखि 70०% हुनुपर्छ। जोरदार व्यायामको दौरान, यो तपाइँको अधिकतम मुटुको दर को बारे मा 70% देखि 85% हुनु पर्छ।
यदि तपाईं आफ्नो अधिकतम मुटुको दर भन्दा बढि हुनुहुन्छ भने, तपाईंले दुखाइ दुखाइ, दुखाइ मांसपेशीहरू, वा मस्कुलोस्केटल चोटहरू अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। मुटुको दर मोनिटर व्यायाम गर्दा लगाउन को लागी महान हो किनकि उनीहरूले तपाईको मुटुको दर वास्तविक समयमा देखाउँछन्।
मुटुको दर कसरी कम गर्ने (छोटो र दीर्घकालीन दृष्टिकोणहरू)
यदि तपाइँको मुटुको दर धेरै छ भने त्यहाँ सुरक्षित रूपमा कम गर्ने तरिकाहरू छन्। तपाईको मुटुको दर व्यायाम पछि उच्च हुन सक्छ वा किनभने तपाई तनाव वा चिन्तित हुनुहुन्छ।
यहाँ केहि द्रुत-अभिनय विधिहरू छन् जुन द्रुत हृदय दरलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ:
श्वास अभ्यास: तपाईको सास फेर्न तपाईको मुटुमा एओर्टिक प्रेशर बढाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईको मुटुको दरलाई कम गर्दछ। यसो गर्न तपाईको मुख र नाक बन्द गर्नुहोस् र तपाईंको छातीमा दबाब बढाउनुहोस्। पाँच देखि आठ सेकेन्डको लागि सास फेर्नुहोस्, यसलाई तीनदेखि पाँच सेकेन्डसम्म समात्नुहोस्, र त्यसपछि बिस्तारै छोड्नुहोस्। यो धेरै पटक दोहोर्याउन सकिन्छ।
नुहाउनु: यसले तपाईंलाई आराम दिन र तपाईंको मुटुको दरलाई तल ल्याउन मद्दत गर्दछ।
हल्का योग: शान्त योग वा ध्यानले तपाईंलाई आराम दिन र उच्च हृदय दर ल्याउन सहयोग गर्दछ।
कूलर स्थानमा सर्दै: यदि तपाईंको मुटुको दर बढाइएको छ किनकि तपाईं एकदम तातो हुनुहुन्छ भने, कूलर स्थानमा सर्दा यसलाई तल झार्न मद्दत गर्दछ।
यहाँ केहि दीर्घकालीन समाधानहरू छन् जुन तपाईलाई स्वस्थ हृदय दर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ:
नियमित व्यायाम:व्यायाम कार्यक्रम सुरू र राख्नु समयको साथ आराम मुटुको दरहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ।
स्वस्थ खाने: स्वस्थ आहार जसले सम्पूर्ण अन्नहरू, पातहरू साग, फलफूल, र ओमेगा fat फ्याट्टी एसिडहरू समावेश गर्दछ दीर्घकालीन हृदय स्वास्थ्यलाई समर्थन गर्न मद्दत गर्दछ र हृदय रोगलाई बेडमा राख्न मद्दत गर्दछ।
धूम्रपान छोड्दै: धूम्रपान नहुने व्यक्तिसँग क जोखिम कम बारम्बार हृदयघात र हृदय रोग को।
हाइड्रेटेड रहँदै: पर्याप्त पानी पिइरहेको छ हृदयले शरीरमा रगत सजिलै पम्प गर्न अनुमति दिन्छ।
सम्बन्धित: गर्भावस्थामा कसरी तपाइँको मुटुको देखभाल गर्ने
जब तपाइँको डाक्टर लाई कल गर्ने
मुक्ति शरीरमा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण अ .्ग हो। यदि केहि गलत भयो भने, परिणामहरू कहिलेकाँहि घातक हुन्छन्। केहि मुटु समस्याहरु हार्ट अटैक जत्तिकै हानिकारक नहुन सक्छ, तर यसको मतलब तिनीहरू गम्भीर रूपमा लिनु हुँदैन।
यदि तपाइँको मुटुको दर सामान्य दायरा भित्र भएको छ र अचानक छैन भने तपाईले डाक्टरकहाँ जानु पर्छ। यसले तपाइँ जस्तो मुटुको समस्या भएको संकेत गर्दछ एरिथमिया जुन एउटा असामान्य हृदय ताल हो, टाचिकार्डिया त्यो हो जब मुटु लगातार धडल्दछ 100 भन्दा बढि बीपीएममा, वा ब्राडीकार्डिया जुन तल्लो मुटुको दर हो जुन b० बिपएम भन्दा कम छ।
तपाईंले आकस्मिक देखभाल खोज्नुपर्दछ यदि तपाईंको छिटो मुटुको दरले श्वास दुखाइ, छाती दुख्ने, धड्कन, वा चक्कर आउने जस्ता लक्षणहरूको परिणाम दिईएको छ भने, इवान जेकब्स, एमडी भन्छन, कार्डियोभास्कुलर सर्भिसमा क्षेत्रीय चिकित्सा निर्देशक। कन्भेभ्या केयर केन्द्रहरू । सामान्यतया, लक्षणहरूको पर्वाह नगरी, प्रति मिनेट १ be० धडकन माथिको लगातार मुटुको दरले तत्काल मूल्यांकन तुरुन्त गर्नुपर्दछ। तपाईंको प्राथमिक हेरचाह चिकित्सक वा हृदय रोग विशेषज्ञ प्रति मिनेट १०० र १ 130० बिट्स बीचको दरमा सतर्क हुनुपर्दछ र केस-केस-केस आधारमा आपतकालिन हेरचाहको आवश्यकताको बारेमा निर्णय लिन सक्नुहुन्छ।
Allergan सम्झना:5छिटो तथ्य तपाइँ जान्न आवश्यक छ
मधुमेह को लागी रक्त शर्करा दायरा के हो
योजना बी गोली १०० प्रतिशत प्रभावकारी छ
म कहिले योजना बी गोली लिन सक्छु?
किन स्याउ साइडर सिरका तपाइँको लागी राम्रो छ
खमीर संक्रमण दुखाई को लागी के लिने
के तपाइँ काउन्टर मा metacam किन्न सक्नुहुन्छ?